Greenhouse Beeraha ugu Fiican, Soosaarayaasha Greenhouse ee Ganacsiga | Shengqiang
U oggolow inaad ku raaxeysatid daaqadaha buuxa ee loo yaqaan 'stop stop' hal joog u jooji adeegga aqalka dhirta ee xirfadleyda ah.
Greenhouse Filim caag ah
Xaashida Polycarbonate ee Greenhouse
Muraayad lagu koriyo
Guryaha dhirta dhirta ee iftiinka leh
Shengqiang Greenhouse aqalka cagaaran ee Shengiang U oggolow inaad ku raaxeysato si buuxda u-joojiyo adeeg xirfadeed
Xirfadleyda xirfadleyda leh ee aqalka dhirta lagu koriyo ee beeraha leh 18 + sano.
Bandhigga aqalka dhirta dhirta dhirta dhirta
Beeraha dhirta lagu koriyo waa geedi socodka ku abuurista dalagyada iyo khudradda jawiga deegaanka ee lagu koriyo. Shengqiang Beeraha Greenhouse Beeraha Greenlohoureyaasha Soosaarayaasha Greenlog-ka ayaa ku siin doona bogga ugu wanaagsan ee lagu koriyo filimka caaga ah, galaas cagaaran, cagaaran polycarnarbonate, iyo qalabka cagaaran.
Kaydinta filimka caaga ah ee xirfadleyda ah ee xilliga khudradda ka hortagga xilli-ciyaareedka
Aqalka dhirta lagu koriyo ee filimka balaastigga ah oo fara badan ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa beerista yaanyada, khudradda, miraha iyo ubaxyada. Waxay ku siin kartaa xaaladaha iftiiminta habboon, qoyaanka iyo heerkulka, kor u qaadista wax soo saarka iyo iska caabinta masiibooyinka dabiiciga ah. Waxay horay uqaadan kartaa ama dib udhajin kartaa bixinta, iyadoo lagafeynayo is burinta bixinta iyo baahida.
GUURKA GUUD EE KELIYA EE KELIYA KHATARTA GUUD
Dhaqanka beeraha ee ShiinahaHal ka mid ah tunnel caaga ah oo gudaha ah ayaa laga keenay tuubbada kulul ee kulul oo leh saddex lakab oo filim ah oo loogu talagalay waxyaabaha daboolaya. Qaab dhismeedka jirku waa mid fudud, qaali ah oo rakhiis ah oo fududahay in la rakibo.
Shiinaha venlo beeraha multi-taako hydroponic PC greenhouse
Aqalka dhirta lagu koriyo ee loo yaqaan 'polycarbonate sheet' waxaa laga door bidaa nooca loo yaqaan 'Venlo', iyadoo la adeegsanayo saqaf fara badan, oo leh qaab casri ah, qaab dhismeed deggan, qaab quruxsan, qaab siman, waxqabadka kuleylka kuleylka cajiibka ah, heerka gudbinta iftiinka dhexdhexaadka ah, biyo mareeno badan oo roob ah, taako weyn , mugga dheecaanka, awoodda iska caabbinta dabaysha oo xoog leh, oo ku habboon aagga dabaysha weyn iyo roobka. Jilayaasha qaabdhismeedka: 1.Greenhouse waxaa lagu qaatay biraha birta oo dhan sida kuwa heysta oo shaqeynaya in ka badan 15 sano. Nolosha xaashidaPC waa ugu yaraan 10 sano. Duufaan xoog leh oo dabeyl / baraf ah. 3. Qaabdhismeedka bolted, fududahay in la rakibo. 4.Multi-taako design whit meel bannaan oo weyn. Waxay bixin kartaa saamiga isticmaalka sare ee dhulka waana xulashooyin wanaagsan oo ku saabsan beero ballaadhan iyo hawlgalka mishiinka.
Aqalka dhirta lagu koriyo ee PC-ga ee dhaqaalaha iyo waara leh oo leh qalab hawo leh
Aqalka dhirta lagu koriyo ee loo yaqaan 'polycarbonate sheet' waxaa laga door bidaa nooca loo yaqaan 'Venlo', iyadoo la adeegsanayo saqaf fara badan, oo leh qaab casri ah, qaab dhismeed deggan, qaab quruxsan, qaab siman, waxqabadka kuleylka kuleylka cajiibka ah, heerka gudbinta iftiinka dhexdhexaadka ah, biyo mareeno badan oo roob ah, taako weyn , mugga dheecaanka, awoodda iska caabbinta dabaysha oo xoog leh, oo ku habboon aagga dabaysha weyn iyo roobka. Jilayaasha qaabdhismeedka: 1. Greenhouse waxaa lagu qaatay biraha birta oo dhan sida kuwa heysta oo shaqeynaya in ka badan 15 sano. Nolosha xaashidaPC waa ugu yaraan 10 sano. 2. Iska caabin culeys dabeyl / baraf xoog leh. 3. Qaabdhismeedka bolted, fududahay in la rakibo. 4. Naqshadeynta qaabdhismeed fara badan oo cad meel bannaan oo gudaha ah. Waxay bixin kartaa saamiga isticmaalka sare ee dhulka waana xulashooyin wanaagsan oo ku saabsan beero ballaadhan iyo hawlgalka mishiinka.
Qingzhou Shengqiang Shengqiang Injineer Injineering Co.ltd. Waxay u hogaansameysaa falsafada ganacsiga "tayada koowaad, macmiilka marka hore" .Shaqaalaha aqoon-isweydaarsiga ayaa ah in kabadan 40000 mitir oo laba jibbaaran, oo ay kujirto naqshadda guryaha lagu koriyo, oo ay kujirto naqshadda cagaaran, oo ay kujiraan soosaarista, waxsoosaarka, rakibidda, rakibidda.
Alaabada ugu muhiimsan: koriyo polycarbonate sheet, aqalka dhirta lagu koriyo galaas, multi lagu koriyo filim taako, aqalka dhirta lagu koriyo oo ubax, aqalka dhirta lagu koriyo beerista hydroponic, xoolaha beeraha lagu koriyo, aqalka dhirta lagu koriyo beeraha, aqalka dhirta lagu koriyo ganacsiga, seeding lagu koriyo, aqalka dhirta lagu koriyo hal film taako, aqalka dhirta lagu koriyo beerta qoyska, nidaamka lagu koriyo la accessories.
Mashaariicda Guryaha ee Guryaha Beeraha badan ee Kuweyniyada
Mashaariicda Guryaha ee Guryaha Beeraha badan ee KuweyniyadaSoo-saareyaasha Gargaarka ee Shiinaha: Waad ku mahadsantahay kalsoonida macaamiishayada. Waxaan ku bilownay qalabka dhirta lagu koriyo galaas ee Kuweyt. Waxaad ka heli kartaa guryaha lagu koriyo oo tayo sare leh oo leh qiime tartan
1. Warshadeena aqalka dhirta lagu koriyo ee ganacsiga ayaa ku hawlanaa wax soo saarka guryaha lagu koriyo wax ka badan 10 sano, waxay leedahay wax soo saar badan iyo khibrad dhisme iyo tikniyoolajiyad.
3. Warshaddayada iyadoo loo eegayo baahiyaha macaamiisha waxay naqshadeeyaan barnaamijka ugu wanaagsan, oo ku saabsan tayada tayada sare ee macaamiisha si loo badbaadiyo kharashaadka laguna kordhiyo hufnaanta macaamiisha.
4. Warshaddeena Gargaarka Guryaha Ganacsiga ah ayaa bixiya damaanad hal sano ah. Waqtiga damaanada ka dib, waxaan noqon doonnaa qiimaha ugu macquulsan ee aan ku bixinno beddelka qalabka guryaha lagu koriyo.
Nala soo xiriir nasashada naqshadda bilaashka ah
Wixii loogu talagalay aqalka dhirta dhirta dhintaley iyo alaabada lagu koriyo ee ganacsiga ee la xiriira su'aasha la xiriira, ku soo dhawow naga weydiiso naga weydiiso.